Toetr’andro : tsy hisy orana raha tsy amin’ny faran’ny herinandro | NewsMada
Toetr’andro : tsy hisy orana raha tsy amin’ny faran’ny herinandro
Nitondra fanazavana omaly, ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby fa nisy fiovana tampoka ny tsindrin’ny atmosfera. Tsy hisy orana eto Antanaanrivo raha tsy amin’ny faran’ny herinandro na amin’ny fiandohan’ny herinandro ambony io. Mbola ho maina sy mafana araka izany ny andro raha ny eto afovoan-tany.
Hahazo orana arahin-kotroka kosa ny any amin’ny faritra Melaky sy Menabe ary ny any Atsimo Atsinanana. Toraka izany ny any Itasy sy Vakinankaratra ary Amoron’i Mania. Hitohy hatramin’ny faran’ny herinandro izao izany orana izany amin’ireo faritra ireo.
Tsikaritra ihany koa ny fisian’ny setroka mandrakotra ny habakabak’Antananarivo. Voalaza fa vokatry ny doro tanety any amin’ny faritra manodidina an’Antananarivo no mahatonga izany ary tsonfin’ny rivotra ka miangona eto afovoan-tany.
Mitahiry ny hafanana sy mahamaina ny atmosfera ihany koa io setroka io raha ny fanazavan’ny mpamantatra ny toetry ny andro hatrany.